Enomtsalane Pet-friendly casita, kufutshane nomlambo, iilwandle - I-Airbnb
Enomtsalane Pet-friendly casita, kufutshane nomlambo, iilwandle
Heroica Mulegé, Baja, Mexico
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguClementines
ILa Casita yenye yeepropati ezininzi ezilawulwa nguClifford Taylor phantsi kwegama elithi CLEMENTINES.
ILa Casita yindlu entle, yokuma yasimahla enegumbi nje elinye elikhulu, enepatio entle ebiyelwe ngodonga yokuhlala ngaphandle. Igumbi eliphambili libanzi kwaye alixutywanga. Iincwadi zesikhokelo zithi ineyona bhedi itofotofo kuyo yonke iBaja! Thatha ukutya kwakho ekhitshini okanye ngaphandle. Yindawo epholileyo kwaye epholileyo yokuphumla, sebenzisa njengesiseko sohambo lwemihla ngemihla okanye ukonwabela imisebenzi emininzi yangaphandle.
Nangona incinci, iLa Casita ayiziva ixinene okanye ixinene. Ihonjiswe ngokulula kodwa ngokunomtsalane kwaye izaliswe kukukhanya kwelanga. Kukho indawo yokulala, ukusebenza kwitafile encinci, ukupheka isidlo okanye indawo yokuphumla ngaphandle. Izilwanyana zakho zasekhaya zinokudlala ngokukhuselekileyo kwipatio ebiyelwe ngodonga, ekunika ubumfihlo obupheleleyo kubamelwane bakho. Ifeni yesilingi kunye neefeni eziphathwayo zokufudumeza / zokupholisa zilungelelanisa ubushushu ngamaxesha ahlukeneyo onyaka.
I-Oasis Rio Baja luluntu olonwabileyo lwezindlu zaseCaribbean ezibekwe ecaleni kweRio de Rosalio, iikhilomitha nje ezimbalwa ukusuka kwidolophu yaseMulege. Ihlaliswe kakhulu ngabantu abavela e-US, eCanada naseYurophu, yindawo ebekiweyo, enoxolo-iparadesi encinci elangeni. Akukho bomi basebusuku okanye ukuzonwabisa eluntwini-uya eMulege ngaloo nto-kodwa iintsuku zakho zinokuzaliswa kukuqubha, ukukhwela ibhayisekile, ukukhwela ibhayisekile, i-snorkeling, ukubukela iminenga, ukukhwela intaba, ukuloba, ukuloba, ukubukela iintaka, uhambo olwahlukeneyo lwemini. kwindawo ejikelezileyo, isikhephe siphuma sisiya eziqithini kwaye sindwendwela kumanxweme amaninzi amnandi kuLwandle lwaseCortez, zonke ziphakathi kweemayile ezimbalwa.
Umbuki zindwendwe ngu- Clementines
Izimvo eziyi-1 077
Umamkeli uClifford Taylor uhlala ngaphaya kwesitrato e # 502. Unokufikelelwa ngokulula ngomnxeba kwaye nokuba nguye okanye umamkeli-ndwendwe u-Antonia phantse basoloko befumaneka ngoncedo kunye neengcebiso zasekhaya.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Heroica Mulegé